Amavidiyo anconyiwe - Isisekelo Somvuzo - Uthando, Ucansi ne-Intanethi
Ikhaya Resources Amavidiyo anconyelwe
Amavidiyo yindlela esheshayo yokufinyelela isayensi eyisisekelo mayelana nokulimaza kokubuka izithombe ze-intanethi.
Nazi ezinye esizincomayo. Azinazo izithombe zobulili ezingcolile.
UMary Sharpe wethula umsebenzi we-The Reward Foundation ku Umphumela Wezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi Emphakathini (isikhathi sokusebenza i-2: 12)
Ngo-2016 amalungu e-The Reward Foundation akhuluma kwiNgqungquthela Yesithathu Yomhlaba Wonke Yezobuchwepheshe Umlutha e-Istanbul, eTurkey. UDarryl Mead wakhuluma Izingozi abantu abasha abhekene nazo lapho beba ngabathengi bezingcingo (isikhathi sokuqalisa 12.07). UMary Sharpe wabheka Amasu okuvimbela ukulutha kwezidakamizwa ze-intanethi (isikhathi sokuqalisa i-19.47). Isikhulu sethu soPhenyo ohloniphekile, uGary Wilson, wakhuluma Ukuqeda ukusetshenziswa okungcolile kwe-inthanethi kwe-intanethi kwembula imiphumela yayo (isikhathi sokuqalisa i-17.24).
I-Demise of Guys
Isazi sokusebenza kwengqondo eStanford University uPhilip Zimbardo ube nomthelela omkhulu ekucabangeni ngamathonya enza ukuthi abafana bangaphumeleli kahle esikoleni. Ku 'I-Demise of Guysubuza ukuthi kungani ukusebenza kwabafana kubonakala kwehla emhlabeni wanamuhla (isikhathi sokuqalisa 4:43).
Isivivinyo Esikhulu Sokuzijabulisa
Ku-2012 uGary Wilson uphendule inselelo kaPhilip Zimbardo nge-'The Great Porn Experiment '. Ibeka ubufakazi bokusetshenziswa kanzima kwezithombe zocansi ze-intanethi njengenye yezimbangela zokwehla jikelele kokusebenza kwabafana. 'I-Great Porn Experiment' manje isibukwe ku-YouTube izikhathi ezingaphezu kwezigidi eziyi-13.7 futhi isihunyushelwe ezilimini eziyi-18 (isikhathi esisebenzayo 16:28).
Ubuchopho bakho ku-Porn: Yeka ukuthi i-Inthanethi iyithinta kanjani ubuchopho
Lesi sethulo sevidiyo se-2015 sinjalo buyekeza nokunwetshwa kwenkulumo yokuqala ye-TEDx kaGary Wilson (isikhathi esisebenzayo: 1 hr 10 amaminithi).
Ukungasebenzi Kwe-Erectile Ezingcolile
As ukungasebenzi kahle kwe-erectile ingenye yezinkinga ezikhathazayo kakhulu kubantu abasha kanye nemibhangqwana, kubalulekile ukubukela le nkulumo kusuka ku-2014 ukuze siqonde okwenzekayo ebuchosheni nasezihlosweni zokuziphatha uma sithola izinto eziningi ezithinta umzimba. Kungaphulukiswa ezimweni eziningi ezinyangeni eziningi uma umsebenzisi eyeka izithombe zobulili ezingcolile bese evumela ubuchopho ukuthi buyithole (isikhathi sokusebenza: 55: 37).
I-Science of Pornography Isilonda
asapSCIENCE idale le bhodi yezindaba efinyeleleka ngempela. 'I-Science of Pornography Isilonda'yisifinyezo esicacile sokuthi izithombe zocansi zingaba umlutha kanjani nokuthi kungani (isikhathi sokuqalisa 3:07).
Ukulinganisa Imiphumela Yezithombe Zobulili Ezingcolile
U-Gary Wilson usiyisa ngendlela yokuthi lemibuzo yokuhlola imibuzo embi ingabangela imiphumela engalungile ngemiphumela yezempilo yokusebenzisa i-pornography ye-intanethi (isikhathi sokusebenza i-6: 54).
Ubuchopho Bentsha Yenza I-Porn Speed ​​Ye-intanethi Isheshayo
Uma unentshisekelo kuzici ezihlukile zobuchopho bomuntu osemusha kusukela eminyakeni eyi-12 kuya kwengu-25 kanye nomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi kulobobuchopho obuzwelayo, bukela le nkulumo (isikhathi sokugijima: amaminithi angu-33).
Buza i-Neurosurgeon Mayelana nomthelela we-Porn Porn ku-Brain
Lokhu ngokujulile Ingxoxo ye-TV ne-neurosurgeon uDkt Donald Hilton kufanelekile ukubukela (isikhathi sokugijima: 22: 20).
Inkulumo enhle ye-TEDx ebheka isayensi esekelayo yokulutha kabi kocansi inguDouglas Lisle 'Umculi Wokuthakazelisa'(isikhathi sokuqalisa 17:10).
Umehluko phakathi Pleasure and Happiness
Kule vidiyo eyenziwe yi-University of California TV ebizwa ngokuthi “Ukukhishwa kwe-American Mind", Isazi se-neuro-endocrinologist uRobert H Lustig uyachaza ngamagama alula umehluko phakathi kobumnandi nenjabulo njengomsebenzi we-dopamine ne-serotonin ebuchosheni. Ibheka impilo yansuku zonke kanye nezinto eziphoqelelayo nezidonsayo ezinomthelela ekubekweni kwethu okuhle kube ngcono noma kubi. Ifingqa incwadi yakhe entsha ethi “The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate Takeover of Our Brains and Bodies. (Isikhathi sokuqalisa: 32:42).
I-Cup of Tea
Ufuna ukwazi ngokuvuma nobulili? Ngabe 'cha' kusho ukuthini ukuthi 'CHA!' Thola nge 'I-Cup of Tea'(inguqulo ehlanzekile, Isikhathi sokuqalisa 2:50).
Ufuna ukubona okuningi?
Indawo enhle ongayibheka yi 'yourbrainonporn.com'lapho uGary Wilson eqoqe khona izixhumanisi ezinhle kakhulu kumavidiyo awusizo kakhulu ngesayensi yokulutha kabi kocansi.